NKỊTỊ DISK DEFRAGMENTER: TOP 10 - DISK - 2019
Iji melite arụmọrụ nke kọmputa site n'oge ruo n'oge kwesịrị iweghachite iwu na draịva siri ike. Ihe eji eme ihe na-enye gị ohere ịkwagharị faịlụ n'ime otu nkeji ka akụkụ nke otu ihe omume dị n'usoro n'usoro. Ihe a niile gbapụrụ kọmputa.
Onye nkesa Diski kachasị mma
Taa, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ a ma ama maka imebi disk disk. Onye ọ bụla nwere uru nke ya.
Otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma iji weghachite iwu n'usoro kọmputa. Na-enye gị ohere iji rụọ ọrụ nke ọ bụghị naanị na diski dum, kamakwa akụkụ nke ọ bụla na akwụkwọ ndekọ.
Ihe ọzọ nkata mgbasa ozi disk. Ị nwere ike ịme ngwa ahụ ngwa ngwa, nke ga-ebugharị usoro faịlụ.
Enwere nsụgharị nke usoro ihe a n'efu. Nke a nwere ọrụ ndị ka elu. Ngwaọrụ ahụ na - enye gị ohere ọ bụghị naanị iji dozie mgbasa ozi, kamakwa iji lelee ya maka njehie.
Ọ nwere ọrụ nile nke omume ndị dị n'elu. N'otu oge ahụ, ọ na-enye gị ohere ịmepụta usoro mgbasa ozi diski.
Uru na-abaghị uru na-arụ ọrụ ọ bụghị nanị na diski, kamakwa na faịlụ na ndekọ. Ọ nwere ọrụ dị elu nke na - enye gị ohere ịkọwa ụfọdụ ntọala maka nchịkwa.
Ya mere, ịnwere ike iji usoro ihe omume ahụ na-aga na njedebe nke diski ahụ, ma na-ejikarị ya - ná mmalite. Nke a mere ngwa ngwa.
Ihe omume nke na-eme ka diski ike dị ọtụtụ ugboro ngwa ngwa karịa ngwa OS ọ bụla. Mgbe ịmalitere usoro ihe omume ahụ, họrọ nhọrọ nke chọrọ ma malite mmalite.
Usoro kachasị mma, nke gụnyere ọtụtụ atụmatụ, gụnyere mgbasa ozi diski.
Usoro ihe omume ahụ nwere interface dị mfe nghọta, yana ọrụ ndị mbụ maka ngwa dị otú ahụ, gụnyere ike ịlele diski maka njehie.
Ngwaọrụ ahụ na-enye ma ndị novice na ndị ọrụ ahụmahụ aka ịrụ ọrụ, dabere na ntọala ihe omume ahụ. Na njedebe ikpeazụ ahụ, ọrụ ndị ọzọ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ dị mgbagwoju iji melite usoro.
Nke a bụ usoro okwu nke mbụ, nke otu onye na-emepụta ihe n'onwe ya mere.
Usoro mmemme nkata na-enye aka imelite arụmọrụ usoro na melite arụmọrụ kọmputa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ngwaọrụ gị rụọ ọrụ ruo ogologo oge, mgbe ahụ, ị ​​gaghị echefu ụlọ ọrụ na ngwa ngwa. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ nhọrọ maka ndị ọrụ ahụmahụ na ndị na-amalite.